Latest Winklevoss walaalo' patent crypto daboolayaa ammaanka macaamil digital - Blockchain News
Latest Winklevoss walaalo’ patent crypto daboolayaa ammaanka macaamil digital
Shirkadda A leedahay Cameron iyo Tyler Winklevoss, aasaasayaasha sarrifka cryptocurrency Gemini ah, ayaa la siiyay patent ah nidaam doonayo in lagu hagaajiyo ammaanka xawilaadaha.
Codsiga waxaa lagu xareeyay ee November iyo siiyey on Tuesday by laga xoreeyo dalka ah. Patent iyo Astaanta Office (USPTO). Wuxuuna qeexayaa a “nidaamka, habka, iyo alaabta barnaamijka ka baaraandegidda xawaalad aamin ah nidaamka daruur Kombuyuutarada ah,” la Andrew Laucius, Cem Paya iyo Eric Winer magacaabay alifay (mana of Winklevosses waxaa ka mid ah liiska).
Nidaamkan wuxuu isticmaalaa isku-dar ah farsamooyinka caadiga ah cryptographic, oo ay ku jiraan hawlaha hash iyo saxiixyada digital. Tirokoobyada ka mid ah codsiga sharax in nidaamka waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan ammaanka beddelkeeda hantida a daruur ku salaysan digital.
A New Cryptocurrency Just soo baxay, Taasi waa sida Geesi sida Seeraar
Seeraar ayaa la bilaabay ...
maamulka Japanese joojin kari lahaa sarrifka ee cryptocurrencies
Qaar ka mid ah cryp Japan ee ...
Post Previous:Samsung hadda samaynta chips ASIC for macdanta cryptocurrency
Post Next:Baidu bilawday madal photo stock blockchain ku salaysan